Waa maxay Ryuko Memorial Hall | Ryuko Memorial Hall
Ka soo horjeedka Hallka Ryuko MemorialRyuko ParkGurigii hore iyo qafaalashada ayaa lagu keydiyay, oo neefta nolosha rinjilaha wali waa la gudbiyaa.
Qalabka rinjiyeynta ee uu jecel yahay Ryuko
Kawabata Ryuko Sanadka Gaaban
Wuxuu ku dhashay Magaalada Wakayama.
U guurista Tokyo qoyskiina.Marka hore wuxuu ku koray Asakusa Nihonbashi.
Wuxuu ku bartay rinjiyeynta reer galbeedka Hakuba-kai iyo Ururka Rinjiyeynta Baasifiga.
U safray Mareykanka.Markii uu ku soo noqday Japan, wuxuu u wareegay sawir gacmeedka Japan.
Waxaa lagu xushay markii ugu horeysay Bandhigga 2aad ee Nihon Bijutsuin.
Ka helay Abaalmarinta Chogyu ee Bandhigga 3aad ee Hay'adda.
Waxaa loo xushay Bandhigga 4aad ee Hay'adda.Waxaa kugula taliyay Nihon Bijutsuin Doujin.
Guri cusub oo la dhisay iyo qol rinjiyeyn oo ku yaal Araijuku.
Diiday Nihon Bijutsuin Doujin.
Ku dhawaaqida aasaasida Seiryusha.Bandhiggii ugu horreeyay ayaa laqabtaa.
Helay Amarka Dhaqanka.
Ryuko Memorial Hall ayaa la furay.
Wuxuu dhintay 4-kii Sebtember isaga oo jira 10.